करिश्मा कपुरसँग विवाह नभएपछि अहिलेसम्म अविवाहित छन् अक्षय खन्ना ! कारण यस्तो – Online Khabar 24
करिश्मा कपुरसँग विवाह नभएपछि अहिलेसम्म अविवाहित छन् अक्षय खन्ना ! कारण यस्तो
बलिउड अभिनेता विनोद खन्नाका छोरा अक्षय खन्नाले बलिउडमा आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाएका छन् ।
अक्षयको जन्म २८ मार्च १९७५ मा भएको थियो । अक्षयले बलिउडमा आफ्नो करियर १९९७ मा चलचित्र’हिमालय पुत्र’ बाट सुरु गरेका थिए । अक्षय खन्नाको दोस्रो चलचित्र ‘बोर्डर’ हो ।
अक्षय खन्नाको अन्तिम गर्लफ्रेन्ड सेरा हुन । सेरा एक ब्रिटिस मोडल हुन् । अक्षय र सेरा भेटघाट इङल्याण्डको ट्रिपमा भएको थियो । सेराले अक्षयसँग भारतमै बस्ने निर्णय गरेकी थिइन् । तर पछि अक्षयले एक जर्मन केटीको लागि उनलाई धोखा दिएको हल्ला बाहिरिएको थियो ।
अक्षय खन्नाले चलचित्र ‘एक्सीडेन्टल प्राइम मिनिस्टर’ र ‘सेक्शन ३७५’ मा राम्रो काम गरे । अन्य चलचित्र भने रिलिज हुन बाकी छ । यो पनि अक्षय कुमारका छोरा आरव भाटिया १९ वर्ष पुगेका छन् ।
उनि मिडिया बाट टाढा नै बस्छन् तर आफ्नो ड्यासिङ लुकका कारण उनले आफ्ना लागि उल्लेख्य फ्यानबेस खडा गरेका छन् ।
उनि असाध्यै सुन्दर भएका कारण बेला बेला उनको तस्बिर सोसल मिडियामा भाईरल भईरहन्छ।
हुन त आरवलाई सार्वजनिक रुपमा कमै देखिन्छ । तर जब उनी पापाराजीको क्यामरामा कैद हुन्छन्, तब ती जताततै छाउँछन् । आरवको पार्टीका तस्बिर होस् वा क्यान्डिड तस्बिर, उनको ह्यान्डसम र चार्मिङ लुक्सका कारण कयौ युवतीहरु उनि प्रति फिदा हुन्छन् ।
आरव आफ्ना पिताजस्तै ह्यान्डसम छन् । उनको लुक्स धेरथोर उनका पिता अक्षयसँग मेल खान्छ । पिता र छोराबीच उत्कृष्ट बन्ड छ । आरव आफ्नी आमाको निकै नजिक छन् । ट्वीङ्कल खन्ना सोसल मिडियामा छोराको जीवनसँग जोडिएका अपडेट्स सेयर गरिरहन्छिन् । आरवलाई आफ्नो पितालाई झैं पकाउन निकै शौक छ । आरवको सेन्स अफ ह्युमर पनि निकै राम्रो छ ।
आरवको बलिउडमा प्रवेशको विषयमा विभिन्न अड्कलबाजी गरिन्छन् । छोराको बलिउडमा आउन सक्ने सम्भावना बारे अक्षयले भनेका थिए – मेरो छोरा निकै फरक छ । ऊ मेरो छोरा हो भनेर कसैलाई पनि बताउन चाहँदैन ।
उनी लाइमलाइटबाट टाढा नै बस्न चाहन्छ । ऊ आफ्नो पहिचान आफैं स्थापित गर्न चाहन्छ । म उसलाई उसको आफ्नै तरिकाले बस्न दिन्छु । मेरा पिता मेरो जीवनको प्रेरणा हुन् । मैले उनको सबै नियम पालना गरेँ जुन उनले मलाई सिकाए । आशा गर्छु, आरवले पनि त्यो सब पाउनेछन् ।
आरव निकै क्षमतावान छन् । उनी आफ्ना पिताजस्तै मार्शल आर्टस्मा ट्रेन्ड छन् । आरवसँग ब्राउन बेल्ट छ । उनले जूडो नेशनल च्याम्पियनशिपमा गोल्ड मेडल जितेका छन् । आरवको चार्मिङ पर्सनालिटी र गुड लुक्स धेरैजसो चर्चामा छाइरहन्छ । आरवको नाममा इन्स्टामा थुप्रै फ्यानक्लब बनेका छन् जहाँ आरवका क्यान्डिड तस्बिर र सेल्फी भाइरल भइरहन्छन् । यो खबर साभार गरियको हो
Prevगहिरो प्रेम मा रहेर इन्गेजमेन्ट समेत गरेका अक्षय र शिल्पाको सम्बन्ध यो एक कारणले गर्दा बिग्रिएको थियो ?
nextटिकटकबाट बसेको माया प्रेमले होटेलमा बोलायो त्यसपछि ….